Serbia oo guuto ciidamo ah ku kordhisay howl-galka la dagaalanka Burcad-badeeda Soomaalida – Radio Daljir
Nofeembar 27, 2013 3:10 b 0
Jabuuti, November 27, 2013 – Dowladda Serbia ayaa ciidamo ku biiraya howl-galka la dagaalanka Burcad-badeeda Soomaaliya ku biirinaysa ciidamada midowga Yurub ee howl-galka ka wada xeebaha barriga Afrika.
Ciidamada oo lagu sheegay in ay yihiin guuto si khaas ah u tababaran ayaa u dhaqaaqay dhanka wadanka Jabuuti, halkaas oo ah meesha ugu dambaysa ee howl-galka kaga biiri doonaan.
Serbia ayaa xustay in ciidankeedda ay si toos ah uga howl-geli doonaan xeebaha gacanka cadmeed, waxay fulin doonaan ciidankan cusub weeraro ka dhan ah burcad-badeeda, sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska Serbia.
Howl-galka la dagaalanka burcad-badeeda xeebaha Soomaaliya ayaa weli socda, waxaana hoos u dhac wayn ku yimid weeraradii burcad-badeedu ka fulin jireen xeebaha gobolka, sida lagu sheegay wararka hay?addaha danneeya arrimaha kooxaha burcad-badeeda ah.
Ciidamada Serbia ee ku biiraya howl-galka AMISOM ayaa qaatay tababar dheeraad ah oo ay bixiyeen Greece iyo France, ciidanka ayaa ah kuwa la soo xulay.
Dalalka midowga Yurub ayaa ah kuwa ugu badan ee howl-galka la dagaalanka Burcad-badeeda ku jira.